क्षेत्रीय अस्पतालको अर्को सफलता, २ महिनासम्म एनआइसियुमा राखेर शिशु बचाईयो – Enayanepal.com
क्षेत्रीय अस्पतालको अर्को सफलता, २ महिनासम्म एनआइसियुमा राखेर शिशु बचाईयो
सुर्खेत, मंसिर १६ । पछिल्लो समय मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतले आफ्नो सेवा थप प्रभावकारी बनाउँदै आईरहेको छ । केही दिन अगाडी काठमाडौंको वीर अस्पतालमा पाईने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाटै दिने घोषणा गरेको क्षेत्रीय अस्पतालले विगत १ वर्षदेखि सुरु गरेको नवजात शिशु कार्यक्रम देशमै सफल बनेको दावी गरेको छ ।
कान्ति बाल अस्पतालले समेत चलाउन हम्मेहम्मे परेको कार्यक्रम क्षेत्रीय अस्पताल आफ्नै श्रोत साधनमा सञ्चालन गरेर बालबालिकाको ज्यान बचाउनसमेत सफल भएको छ । ७ महिनामै जन्मिएको एक शिशुलाई करिब साढे २ महिना एनआईसियुमा राखेर बचाउन सफल भएको बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज के.सी.ले जानकारी दिए ।
आफ्नै पहलमा भारतबाट ‘क्याफिन’ नामको औषधी मगाएर बच्चालाई दिइएको डा. के.सी.ले बताए । नवजात शिशु कार्यक्रम सरकारले दिएको निःशुल्क सेवा हो र यसका लागि क्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नै आन्तरिक आर्थिक श्रोत परिचालन गरेर शिशु स्वास्थ्यमा योगदान दिंदै आएको छ । आफ्नै पहलमा एनआईसियु सेवासमेत सुरु गरेको यो अस्पतालले १ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुहरुको उपचार गर्नेदेखि नवजात शिशुहरुको निःशुल्क उपचार दिइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले सिमित आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराएको अवस्थामा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोले आफूहरु देशभरमै सफल भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख एवम् मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. डम्बर खड्काले जानकारी दिए । जसरी देशका कुनै पनि अस्पतालले आफ्नै श्रोतमा यो कार्यक्रम चलाउन सकेका छैनन्, निमित्त प्रमुख एवम् मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. खड्काले भन्नुभयो, “हाम्रो एनआईसियु त अझ विशेष छ र निःशुल्क रुपमा शिशुको उपचार हुन्छ ।”
२७ डिग्रीको तापक्रममा राख्नुपर्ने र अत्यन्त संवेदनशील उपचार केन्द्रको रुपमा निर्माण गरिएको एनआईसियु सेवा क्षेत्रीय अस्पतालमै सञ्चालन गरिनु समग्र ६ नम्बर प्रदेशका लागि पनि खुसीको कुरा भएको उनले बताए । दिनरात खटेर शिशु बचाउन सफल भएको अर्का डाक्टर अनिता दाहालको भनाइ छ । यस्तो कार्यक्रम चलाउनका लागि छुट्टै जनशक्ति र तालिमको आवश्यक भएपनि आफ्नै जमर्कोमा यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको डा. दीपा भण्डारीले बताईन् ।
अस्पतालले यसरी आफ्नो बच्चा बचाइदिएकोमा डिला गिरी पनि खुसी हुनुहुन्छ । क्षेत्रीय अस्पतालमै यस किसिमको प्रविधि र उपचार पाएकोमा आफू डाक्टरहरुप्रति कृतज्ञ भएको गिरीको भनाइ छ । हाल अस्पतालले काठमाडौं लगायतका अत्याधुनिक सहरमा सरकारी अस्पतालले दिने ल्याब तथा डाक्टरद्वारा गरिने चेकजाँच सेवा आफूहरुले दिइरहेको बताएको छ ।